प्रजातन्त्र देखि गणतन्त्रको स्थापना कांग्रेस कम्युनिस्टका नेताहरुले गरेको हैन « Swadesh Nepal
प्रजातन्त्र देखि गणतन्त्रको स्थापना कांग्रेस कम्युनिस्टका नेताहरुले गरेको हैन
-जनकमान डंगोल ।
बि.स.२०४५ सालमा छिमेकी भारतमा कांग्रेस आइको सरकार थियो । कांग्रेस आईको अध्यक्ष स्व.राजिब गान्धी पार्टी संगै सरकार प्रमुख पनि थिए । बिस्तारबादको नीति लिएको भारत सरकारको मुखियाले आफ्नो फाईदाको लागी नेपालको राजा स्व.बिरेन्द्रलाई प्रजातन्त्र स्थापनाको लागी पटक पटक अनुरोध गरे । राजा सहमत भएनन ।
भारत नेपालमा पहिला प्रजातन्त्र स्थापना गरेर राजाको अधिकार कटौती गर्न चाहन्थ्यो । राजाले पटक पटक आफ्नो प्रस्ताब अस्विकार गरेको देखेर क्रुद्ध भएका स्व.गान्धीले आफ्नी आमा स्व. ईन्दिरा गान्धीको सिक्किम फर्मुला अपनाउदै भारतीय जासुसी संस्थाको ‘रअ’ को पूर्व स्पेशल डायरेक्टर अमर भूषण लाई नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको लागी खटाए । अमर भुषण गोप्य तरिकाले नेपालमा आएर छद्म नाम ‘जिवनाथन’ धारण गरेर नेपालको सबै प्रतिबन्धित राजनीतिक पार्टीका नेताहरु संगको भेटघाट तिब्र बनाए ।
यस्ता प्रकारको गतिबिधि बाट क्रुद्ध भएको स्व.राजा बिरेन्द्रले छिमेकी चिन संग सहयोग मागेको खबर तिनै मार्फत भारत सरकार समक्ष पुग्यो । भारत नेपालले चिन संग सम्बन्ध बिस्तार नगरोस भन्ने चाहन्थ्यो । नेपालको राजाले चिन संग सम्बन्ध बढाएको खबरले क्रुद्द भएको भारतको गान्धी सरकारले १८ महिना लामो नाकाबन्दी गर्न कुनै संकोच मानेन । भारतको ईसारामा नाचेको नेपालको कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले पंचायत शासन बिरुद्ध जनता उचालेर महिनौ लामो आन्दोलन चलाएको पनि देखिएकै हो ।
१८ महिना लामो नाकाबन्दीको मार झेल्न नसकेको स्व.राजाले २०४६ सालमा दोश्रो पटक प्रजातन्त्र स्थापना गर्न बाध्य भए । प्रजातन्त्र स्थापना त देखावटी मात्र थियो । गान्धी सरकार नेपालमा राजतन्त्रनै नामेट पार्न चाहन्थ्यो । प्रजातन्त्र स्थापना भएको ६ वर्ष नपुग्दै माओबादी आन्दोलनको नाउँमा कथित शसस्त्र जन युद्द सुरु गराईयो । माओबादी को १२ बर्षे जनयुद्ध र भारतको चाल बुझेर पनि बुझ पचाएका नेपालको अदुरदर्शी नेताहरुको कारणले गर्दा नेपालमा राजतन्त्र हटायर गणतन्त्रको स्थापना गर्न भारत सफल भयो । यो सबै घटनाको बारेमा कथित नाम ‘जीवनाथन’ अर्थात भारतीय जासुसी संस्थाको ‘रअ’ को पूर्व स्पेशल डायरेक्टर अमर भूषणले आफ्नो आत्मकथा ‘ईन्साईड नेपाल’ मा सविस्तार बर्णन गरेका छन ।
यी सबै घटनालाई मुर्तरुप दिन भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ सफल भयो । आमा स्व.ईन्दिरा गान्धीले पनि ‘रअ’ कै सहयोगमा कुनै समयको स्वतन्त्र देश सिक्किम हडप्न सफल भएकी थिईन । आमाकै कदम पच्छ्याएर छोरा स्व. राजिब गान्धीले नेपालमा आफ्नो हैकम जमाउन सफल भएको देख्न सकिन्छ ।
देसमा प्रजातन्त्रको स्थापना हामीले गरेका हौ भनेर नेपाली कांग्रेसका नेताहरु घिरम्ले नाक पारेर फुई लाउछ्न । देसमा गणतन्त्र हामीले स्थापना गरेको हो भनेर कम्युनिस्ट पार्टीको एक घटक माओबादीहरु भन्छन । देसमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र देखि २०६४ सालमा गणतन्त्र स्थापना हामीले गरि दिएको हो भनेर भारतको जासुसी संस्थाको पुर्व स्पेशल डायरेक्टर अमर भूषणले किताबनै प्रकाशित गरे पछी नेपालको कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु कताबाट परिचालित रहेछ भनेर बताउनु नपर्ला ।
नेपाल दुई ढुंगा बिचको तरुल हो भनेर सयौ बर्ष अगाडी नेपाल एकीकरणको निर्माता बडामहाराजाधिराज पृथ्बी नारायण शाहले त्यसै भनेका हैनन । छिमेकी चिनको बढ्दो बिकासबाट अत्तालिएको अमेरिका देखि भारतले चिन घेर्ने रणनीति बनाएको र जबसम्म नेपालमा राजतन्त्र हुन्छ तबसम्म योजना सफल हुन सक्दैन भन्ने सोच राखेर बनायको योजनालाई नेपालको अदुरदर्शी नेताहरुले साथ नदिएको भए नेपालमा हज्जारौ हज्जार जनधनको क्षेती पक्कै पनि हुँदैन थियो ।
सिक्किम काजि लेण्डुप दोर्जीले सिक्किमको रास्ट्रपति हुने सपना देखेर जसरि भारतको जालमा परेर देस डुबायो त्यहि गल्ति नेपालको नेताहरुले दोहर्याउदा देसको हालत आज जर्जर भएको छ । नाम मात्रको स्वतन्त्र बन्न पुगेको देस डुबाउने कांग्रेस तथा कम्युनिस्टका नेताहरु हुन । आफ्नो काम फत्ते भए पछी दुधबाट मिल्क्याईएको झिंगा जस्तो बन्न पुगेको सिक्किमे काजीको हबिगत अहिलेको नेपालको नेताहरुको हुँदैछ ।
धेरै देशहरुमा राजतन्त्रको पतन पछी ति देशका शासकहरु निर्वासनमा जान बाध्य भए तर गद्धिच्युत पारिएको राजा ज्ञानेन्द्र अहिले पनि नेपाली जनताहरुको अगाडी शानले शिर ठाडो पारेर हिंड्दै छन । जनताको चाहनाले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको भए नेपालको राजा पनि निर्वासनमा जान बाध्य हुन्थे होलान ।
केहि विद्वान तथा बुद्धिजिबी भन्ने नेता देखि पत्रकारहरुले राजा देखि पुर्व युवराजको बारेमा नकारात्मक सन्देस दिन थालेको पनि थुप्रै भई सक्यो । केहि दिन अगाडी पुर्व युवराज पारस शाह साँझको समय पारेर राजधानीको बसन्तपुर दर्बार स्क्वाएर तिर घुम्न निस्किए । उक्त ईलाकाको जनताहरुले स्वतस्फुर्तरुपमा राजतन्त्र जिन्दाबादको नारा लगाए । जति सुकै बनावटी कुरा पस्के पनि जनताको नजरमा अहिले पनि राजसंस्था प्रति उत्तिकै सम्मान छ भन्ने यो जस्तो गतिलो प्रमाण अरु के हुन्छ ।
तस्बिर: शिशिर तिवारीको फेसबुकबाट
पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि समय समयमा आफ्नो निवास छाडेर बाहिर निस्किना साथ देशैभरिका हज्जारौ हजारको जन सागरले अहिले पनि राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्न छाडेको छैनन । त्यो भनेको नेपालमा राजसंस्था प्रति जनताको सम्मान अहिले पनि छ भनेर प्रमाणित हुनु हो । जनताको राजसंस्था प्रतिको अगाध स्नेह देखेर नेपालको कठपुतली नेता तथा तिनका आसेपासेहरुको दिनको भोक न रातको निन्द्रा उडेको छ । झिनो स्वरमा राजालाई ठिक पार्छु । जेल हाल्न नपरोस भनेर घुर्की दिन थालेका छन । तिनका घुर्कीले न जनता न राजा डराएका छन ।
ढिलो चाँडो एकदिन सत्यको जित अबस्य पनि हुन्छ । बुझेर वा नबुझेर नेताहरुको लहलहैमा लागेर हिजो जो जसले राजतन्त्र मुर्दाबाद भने तिनै नेपालमा अहिलेको भाडभैलो शासन ब्यबस्था देखेर दिक्क मान्दै बरु राजतन्त्र नै ठिक रैछ भनेर भन्न थालि सके पछी ढिलो चाँडो नेपालमा हिन्दु धर्म सहितको राजतन्त्रको स्थापना अबस्य पनि हुन्छ । देस बचाउने अन्तिम उपाय पनि यहि नै हो ।
प्रकाशित मिति: २०७६ भाद्र २० गते ।